Filmmanus på somaliska
Ku soo dhawow waxbarashada jiheynta bulshada; koorso loogu talo galay qofka ku cusub Swiidhan ee raba inuu helo aqoon dheeraad ah oo ku sabsan taariikhda bulshada Swiidhishka, dimuquraadiyada iyo nidaamka. Koorsada waxa lagu bixiyaa luqada hooyo iyada oo uu dhererkeedu yahay 100 saacadoo, inta u dhaxeysa 4-9 todobaad.
Koorsadan waxaad ka helaysaa fursad aad dib ugu eegto khibradaada iyo sida aad uga qeyb qaadanayso bulshada Swiidhishka taas oo lagu sameynaayo wada hadlaayo, cashar la qaadanaayo ama tabobar la sameynaayo.
Waxbarashada waxa hogaaminaaya xidhiidhiye leh aqoon habka dadka wax loo baro iyo aqoonta bulshada iyo khibrad iyagoo ku hadla luqada hooyo.
Qolka dimuquraadiyada: Waxbarashadu waxay ku salaysan tahay wada hadal iyo dib u jaleecid. Wada hadalka ayaa sal u ah horumarka iyo isbedelka bulsho dimiquraadi ah. Si uuwadahadal u yimaado ayaa loo baahan yahay goob ay dadku ku kulmaan oo ay kaga wada hadlaan iyagoo aan baqdin qabin. Waxbarashada jihenta bulshada ayaa ah goob sidaas oo kale ah.
•Arimahee ayaa saameyn ku leh caafimaadka?
•Sidee ayaa ugaga qeyb qaadan karaa aniga khibradeyda iyo codkeyga?
•Waa maxay masuuliyadeyda iyo xuquuqdeyda wadanka cusubi?